I-Bluebird Cabin - I-Airbnb
Stanley, Idaho, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Jim
U-Jim uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Le ndlu yezingodo ihlala phansi kwe-Sawtooths, amamayela angu-4 nje ukusuka e-Stanley. Sinamagumbi okulala angu-3, ukugeza oku-1, ikhishi eligcwele. Ikhabhinethi isendaweni ethulile esemngceleni wenkonzo yehlathi. Siseduze ne-Stanley Lake kanye ne-Redfish Lake.
Leli khabethe elihlome ngokuphelele lihlala endaweni ethule nje engamamayela amane ukusuka eStanley, eduze komzila we-Iron Creek oya eSawtooths. Inemibhede yezindlovukazi ezimbili nemibhede emibili, ikhabethe libamba kahle eziyisithupha (amaphedi okulala atholakala kumuntu owengeziwe noma ababili).
4.93 · 44 okushiwo abanye
Umpheme ongaphambili unombono wokugcona phezulu kweziqongo zeSawtooth (Williams Peak). Uhambo olufushane lwemizuzu emihlanu luzokunikeza ukubuka okuphelele kobubanzi obusentshonalanga be-Sawtooths kanye neziqongo zamafu Amhlophe ngasempumalanga ngaphesheya kwesigodi.
Indawo yokuhlala yomnikazi nayo ikule ndawo engamahektare amathathu. Sizotholakala ukuze siphendule imibuzo emayelana nezici zasendaweni, njengokuqwala intaba kuma-Sawtooths.
Hlola ezinye izinketho ezise- Stanley namaphethelo